Fametraham-pialana tampoka an'ny CEO Samsung | Androidsis
Rafa Rodríguez Ballesteros | | About us
Androany gaga isika amin'ny vaovao momba ny fialany tamin'ny toerany nataon'i Kwon Oh-hyun. Ny CEO ankehitriny an'ny Samsung goavana teknolojia dia nanambara ora vitsy lasa izay ny fandaozana ny toerany sy ny asany. Araka ny efa fantatsika, ity fametraham-pialana ity dia mety hahomby amin'ny volana ho avy.
Gaga ny tontolon'ny teknolojia izao fametraham-pialana izao. Fotoana fotsiny toa nilamina ny rano tao Samsung taorian'ny herintaona nisian'ny fihenjanana sy tranga. Ary na dia tsy nambara mazava aza ny antony lehibe nahatonga an'io fametraham-pialana tampoka io. Inona no hitranga ao Samsung?.
Toa tany Samsung ihany no nanjaka ny volana farany
Bebe kokoa raha azo atao rehefa avy nahalala fa ny angon-drakitra ara-toekarena amin'ity telovolana ity dia naneho tarehimarika mamporisika. Hafahafa farafaharatsiny farafaharatsiny fa amin'izao fotoana izao dia nandray ny fanapaha-kevitra ny tale jeneralin'ny Samsung ankehitriny. Indrindra rehefa Kwon tenany ihany dia nilaza fa noho ny krizy mbola tsy nisy toa izany.
Azo antoka daholo tadidinao izay nitranga tamin'ny Samsung Galaxy Note 7 malaza ankehitriny. Ary loza ho an'ny orinasa manana laza malaza tsy misy kilema. Ny fatiantoka an'arivony tapitrisa izay niteraka ny krizy lehibe indrindra nanjo ny orinasa teknolojia. Indrindra rehefa vokatry ny tsy fahombiazan'ny tenany tamin'ny fanamboarana ny iray amin'ireo vokatra kintana.
Ny zavatra manaitra dia, mifanohitra amin'izay nantenain'ny rehetra, ny Koreana Hain'izy ireo ny mamadika ny latabatra ary ateraka indray toy ny phoenix avy amin'ny lavenony (mendrika ny fampitahana tsara kokoa noho ny hatramin'izay). Ary mifanohitra tanteraka izany raha vao nahavita niatrika ny tafio-drivotra nisy refy ara-Baiboly, dia nandray izany fanapahan-kevitra izany.
Araka an'i Kwon Oh-hyun, Samsung dia tafiditra anaty krizy lehibe. Y fotoana izao hanomezana lalana ho an'ny taranaka vaovao izay mitondra fanahin'ny fanavaozana. Raha tsy nanonona zavatra mivaingana. Heverinay fa ny krizy dia hiresaka olana anatiny eo amin'ny mpitondra ambony sy ny tolona herin'izy ireo. Satria raha mijery ireo tarehimarika isika, dia manakaiky ny fandresen'i Samsung ny tombotsoany manokana ny Samsung.
Hitantsika indray fa ireo volamena rehetra ireo dia tsy volamena. Ary na dia eo aza ny fahitantsika ny firoboroboana sy isa marobe, misy ny olana lehibe tokoa ka miala andraikitra ny CEO ny iray amin'ireo orinasa teknolojia lehibe indrindra eto an-tany. Inona no hitranga ao Samsung amin'ny fanapahan-kevitra raisina? Hampahafantatra anao izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Fametraham-pialana tampoka an'ny CEO Samsung
Ny telefaona vidin'ny kalitao tsara indrindra amin'ny 2017